सर्भर लागि यूपीएस के हो?
कस्तो यूपीएस छ, शायद कम्प्युटर प्रविधिको क्षेत्रमा हरेक व्यावसायिक थाह र बस एक पेशेवर छैन। तर केही मान्छे एउटै उपकरणबाट व्यक्तिगत कम्प्युटरमा सर्भर लागि विभिन्न यूपीएस थाहा छ। आखिर, लागू सर्भर प्रकार अवस्थाको, सम्म लगाएको अवस्था कम्प्युटर डिग्री आवश्यकताहरु भन्दा बढी। यो सर्भर लागि यूपीएस "आफ्नो काँध मा राख्छ," किनभने नजिकै र रिमोट दुवै छ जो मुख्य एकाइ, को बाह्य को अझै पनि धेरै, साथै छ।
समारोहहरुमा को यूपीएस समझ को चयन संग खडा यसलाई तोकिएको गर्न सुरु गर्नुहोस्। वास्तवमा, स्थिर शक्ति आपूर्ति कायम राख्ने बाहेक, सर्भर लागि यूपीएस अन्य विशिष्ट कार्य को एक नम्बर प्रदर्शन। उदाहरणका लागि, स्वचालित निदान परीक्षण ब्याट्री प्रदान गर्दा केही मोडेल रिमोट नियन्त्रण क्षमताहरु लैन, स्वचालित परीक्षण उपकरण मार्फत छ।
यो एक धेरै ठूलो सिस्टम को दक्षता र resiliency समर्थन किनभने सर्भर लागि यूपीएस, एक धेरै उच्च शक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ। सामान्यतया, प्रदान गर्न पर्याप्त विशेषताहरु एक रैक मा स्थापना उपकरणहरू लागू, र तिनीहरूले थाक मोडमा सञ्चालन। को यूपीएस यस्तो प्रयोग पनि फेला पार्न र सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणाली को संचालन दखल बिना समस्या निवारण गर्न, छ, "तातो मरम्मत" पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। छैन पनि छोटो अवधिको लागि बन्द भन्ने नेटवर्क मा काम गर्दा यो धेरै महत्त्वपूर्ण सुविधा छ।
अनलाइन र अफलाइन: त्यहाँ सर्भर लागि यूपीएस को दुई मुख्य प्रकार हो। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छ। त्यसैले, कक्षा अनलाइन (डबल रूपान्तरण प्रयोग) यो संलग्न छन् कि सबै बिजुली उपकरणहरूको लागि सुरक्षा को उच्चतम डिग्री सुनिश्चित गर्दछ।
एकै समयमा, अफलाइन यूपीएस लागि ब्याट्री द्वारा संचालित छ जो बिजुली, गर्न mains देखि निरन्तर शक्ति लोड स्विच लागि आवश्यकता द्वारा विशेषता छ। र रूपमा पूर्वनिर्धारित स्विच समय शून्य, मा भोल्टेज विभिन्न अनावश्यक spikes त्यसपछि परिणाम हुन सक्दैन। यो नेटवर्कमा एक अस्थायी शक्ति आउटएज खींचती।
डबल-रूपान्तरण समस्या छैन। जनरेटर को लोड एक स्थायी आधारमा जोडिएको छ। खैर, सर्भर लागि उच्च शक्ति यूपीएस मात्र डबल रूपान्तरण हुन सक्छ। सामान्यतया, यी यन्त्रहरू एक कम्प्युटर वा सर्भर को लागि, र सम्पूर्ण सर्भर कोठा, वा कार्यालय भवन मा resiliency कायम राख्न लागि प्रयोग गरिन्छ।
आफ्नो रुचि गर्दा, कृपया सर्भर क्षमता भन्दा बढी दस किलोवाट सीधा तीन चरण नेटवर्क जडान गर्न आवश्यक लागि भनेर यूपीएस याद गर्नुहोस्। पनि आपूर्ति ब्याट्री को क्षमता ध्यान। उनि सीधा ग्रिड देखि बिजुली बिना शक्ति एकाइहरूको सञ्चालन गर्न सम्बन्धित छन्। त्यसैले तपाईं बस तपाईं कति समय पावर सिस्टम मा गल्तीलाई हटाउन हुनेछ जान्नु आवश्यक छ। र सिधै आफ्नो नेटवर्क सेवाहरूको गुणस्तर निर्भर गर्दछ।
ग्राफिक्स कार्ड Radeon R9 390X: वर्णन, सुविधा र मालिकको समीक्षा
कसरी Motherboard चयन गर्न
एक USB फ्लैश ड्राइव ढाँचाबद्ध कसरी गर्ने
आफ्नै हेडफोन मर्मत
वाइफाइ राउटर MGTS जडान सेटअप
कम्प्युटर हार्डवेयर के हो
"Baziron रूप" मुखासे मदत गर्छ? "Baziron रूप": सस्ता एनालग र समीक्षा
इजरायलमा ओनकोलोजी विदेशमा मेलोनामा उपचार
Amur काग। चिकित्सा रूखको औषधीय गुण
'Corvalol' ट्याब्लेटको: परिचित दबाइहरु को एक नयाँ सुविधाजनक फारम
Alginic एसिड: गुण र को विशेषताहरु
वस्त्र, Giovanni Botticelli द्वारा: स्वतन्त्रता र क्लासिक को संयोजन
बाल्यकाल रोगहरु।2डिग्री Adenoides
धेरै प्रारम्भिक सेक्स खतरनाक छ